Taageere Arsenal ah oo wiilkiisa ugu magacdaray Ozil iyo xiddigga oo sidan uga falceliyey – Gool FM
Taageere Arsenal ah oo wiilkiisa ugu magacdaray Ozil iyo xiddigga oo sidan uga falceliyey
Kaafi April 11, 2018
(London) 11 Abriil 2018. Mezut Ozil waxa uu sharaf ku tilmaamay dhacdo taageere Arsenal uu wiilkiisa uga dhigay sami.
Inzamam-Ul-Haq xaaskiisa waxa ay dhashay wiil bishii December sanadkii hore, kahor inta uusan dunida imaan ayuu taageeraha reer India go’aansaday in uu u bixiyo magaca xiddigga Arsenal.
Markii hore waxa uu qorsheystay in uu u bixiyo Arsene Wenger balse waxa uu go’aansaday in uu Ozil ugu magacdaro waxa uuna kaydka gashtay Mohamed Elneny.
Magaca hore wax yar ayaa ka badalan waana Mehd – iyada oo macneedu weyn yahay Inzamam.
“Saaxiibadey, qoyskeyga…qof walba wuu ogyahay wax walba oo aan sameeyo, waa in ay xiriir la leedahay Arsenal,”ayuu Inzamam yiri.
Ozil wuu ka falceliyey markii uu ogaaday waxa uuna sheegay boqorka caawinta in ay taasi ka caawin doonto in uu caawinaad qaab kale ah sameyn doono.
“Sharaf weyn ayey ii tahay in aan dhiirgaliyey magaca cunugan,” ayuu yiri. “Waxaan u dirayaa filasho wanaag India, nasii wacan Mehd Ozil. Waxaan rejeyaya in Mehd uu qoyskiisa ka caawiyo dhoollcadeyn badan iyo xusuuso sanada soo socda.”
Ian Wright oo ku booriyey laba ka mida xiddigaha muhiimka ah ee kooxda Mourinho in ay ka tagaan Mancehster United
DEG DEG: Pep Guardiola oo lagu soo oogay inuu.....